हिजो अलच्छिनी भन्थे, आज बहादुर भन्छन् – Sourya Online
हिजो अलच्छिनी भन्थे, आज बहादुर भन्छन्
चमिना भट्टरार्इ २०७६ जेठ १३ गते ८:४४ मा प्रकाशित
कुनै पनि महिलाका लागि पति गुमाउँदाको क्षण कम पीडादायी हुँदैन । २१ वर्षकै कलिलो उमेरमा सुखदुःखसँगै संघर्ष गर्ने भनेको साथीले एक्लै छोडेर जाँदाको अवस्था कस्तो होला ? कल्पना गर्न पनि कठीन हुन्छ । मुलुकमा चलेको १२ वर्षे द्वन्द्वका वेला धेरैले परिवारका सदस्य गुमाए, त्यस मध्येकी एक हुन्, बर्दियाकी शोभा बिसी । कुनै वेला परिवारबाटसमेत अनेक दुःख बेहोरेकी उनको अहिले परिचय फेरिएको छ । कुनै वेला अवला, एक्ली महिला भनेर आफन्त र समाजले समेत अनेक प्रकारका हिंसा गरेका थिए । तर, तिनै शोभाले १७ वर्षको एकल जीवनमा निकै संघर्ष गरेर समाजको अगुवाको परिचय बनाएकी छन् ।
‘२१ वर्षको थिएँ, पतिले काखे छोरी र मलाई छोडेर जाँदा (एकल महिला हुँदा) । त्यो दिन न बिर्सन सक्छु न सम्झन चाहन्छु । नचाहेर पनि वेलावेलामा सम्झाउनेहरू आउँछन्, सम्झिरहन्छु । त्यो दिन म माइतीघर बाँकेमा थिएँ । तिजको दर खाने दिन थियो । साँझ पतिसँग फोनमा धेरै कुरा भयो । अहिलेजस्तो हाते फोन (मोबाइल) को सुविधा थिएन । आफन्तको घरमा गएर फोन गरेँ । त्यो नै उहाँसँगको मेरो अन्तिम कुरा भयो । त्यसपछि मैले आफ्ना गुनासा सुनाउन पाए न उहाँले आफ्ना कुरा भन्न पाउनुभयो । त्यस दिन फोनमा कुरा टुंग्याउँदै उहाँले दुई दिनपछि पञ्चमीको दिन छोरी र देवरानीसँग पनि कुरा गर्छु भन्नुभएको थियो । उहाँ देवरानीलाई बहिनी जस्तै माया गर्नुहुन्थ्यो । तर, उहाँले फेरी कुरा गर्छु भनेको दिन उहाँको शव घरमा आइपुग्यो ।’
शोभाका पति नेपाल आर्मीमा भएका कारण अर्घाखाँचीमा खटिएका थिए । देशमा चारैतिर सशस्त्र द्वन्द्व चर्किएको थियो । हरेक दिन मान्छे मरेका र घाइते भएका समाचार सुन्नु सामान्यजस्तै भएको थियो । अझ सुरक्षा निकायमा काम गर्नेका परिवारलाई सधैँजसो त्रास भइरहन्थ्यो । को कति वेला मारिन्छ पत्तै थिएन । शोभाका पति सरकारी नुनपानी खाएर देशको शान्ति सुरक्षामा अर्घाखाँचीको सन्धीखर्कमा खटिएका थिए । ०५९ भदौ २३ का दिन उनीसँगै नेपाल आर्मीका १७ जनाले तत्कालीन माओवादीसँग भएको भिडन्तमा ज्यान गुमाउनु प¥यो ।
‘तीजको दिन थियो । उहाँको दीर्घायुको लागि व्रत बसेको थिएँ । तीज महिलाका लागि धार्मिक रूपमा अति नै महत्वपूर्ण पर्व थियो । अझ आर्मीमा भएका कारण सधैँ त्रास हुन्थ्यो । मनमा अनेक कुरा खेल्थे । मैले उहाँको दीर्घायुको लागि व्रत बसेको थिए । तर, उनैले त्यो दिन देख्न पाएनन् ।’ भावुक हुँदै शोभाले भनिन् । ‘बिहान नौ बजेको समाचारमा सन्धीखर्कमा भिडन्त भएको भन्ने सुन्ने बित्तिकै मन आत्तियो, कतै उहाँलाई त केही भएन भनेर त्यसै छट्पटिएँ । केही समयमा उहाँले पनि हामीलाई छोडेर जानुभएको सुनेँ, त्यो समाचारले मन विछिप्त भयो, चारैतिर कालो बादल मडारिएर आएको जस्तै देखँे ।’ यो संसारमा अब कोही छैन जस्तै भयो ।
शोभाले बाबुआमाको रोजाइमा १७ वर्षको कलिलो उमेरमा बिहे गरेकी थिइन् । विवाह गर्ने उमेर पुग्दै जाँदा उनलाई पतिले छोडेर गएका थिए । पतिले छोडेर गएको पीडाले मात्रै उनले सुख पाइनन् । समाज र आफन्तले दिने पीडा पनि सँगै खेपिन् । नेपाली समाज को कसरी म¥यो भन्ने कुराको ख्याल गर्दैन । घाउमा नुन छर्किेनको जमात हाम्रो समाजमा बढी छ । विधवा एकल हुन कसलाई रहर हुन्छ र ? तर, त्यही एक्लै भएकोमा हेर्ने दृष्टिकोण अहिले पनि फेरिएको छैन ।
पतिको मृत्युपछि पनि उनले राज्यका तर्फबाट पाउने राहतमा समेत अनेक हिंसा खेप्नुप¥यो । ‘२१ वर्षको यो जवान केटी लोग्नेको पैसा लिएर पोइल जान्छे भन्ने शंकाले मलाई निकै पोल्यो । नाम थाहा भएन अल्लारे थिएँ । आर्मीकै धेरैले भने पोइल जाने होला होइन ! सासूससुरालाई पनि त्यसै भनेर उक्साए । पति साथमा नभएपछि समाज र आफन्त कसरी पछिलाग्दा रहेछन् भोगेँ । कैयौँपटक आफन्तको मुखबाट अलच्छिनी बुहारी भनेको सुनेँ । पति गुमाएको पीडासँगै अनेक पीडा खेप्नुप¥यो ।’
पतिको १३ दिनको काम सकाएपछि काठमाडौं आयौँ । सासूससुरा पनि साथमै हुनुहुन्थ्यो । मेरो पतिले देशको लागि रगत बगाएर पाउने पैसामा पनि निकै दुःख पाएँ । मलाई लागेको थियो दुःखमा राज्य र आफन्तले साथ देलान तर त्यस्तो भएन । अनेक तिखा वचन सुन्न प¥यो । ती वचन सुन्दा अहिले पनि मन कुँडिएर आउँछ । विपत्तिमा परेका वेला आर्मीका मान्छेले गरेको व्यवहार देखेर निकै दुःख लाग्यो ।
पतिले पाउने पैसामा मेरो हक थियो । तर, त्यसमा उनीहरूले निकै खेल्ने प्रयास गरे कहिले ससुरा उचाले कहिले सासू, त्यो गर्नु आवश्यक थिएन । वेलावेला सासूससुरा पनि आर्मीका मान्छेको उक्साहटमा लाग्नुभयो । मेरा लागि पैसा नै ठूलो कुरा थिएन । उहाँले पनि आफूहरूको मात्रै नाता प्रमाणित गुर्नभएछ त्यसले पूरा नभएपछि मात्रै छोरी र मेरो नाता प्रमाणित गरियो । पति गुमाएर पाउने सात लाख लिन पनि तीनपटक गरेर तीन वर्ष लाग्यो । त्यो पैसाले जग्गा किनेँ घर बनाएँ । त्यो पनि आर्मीलाई कामको विवरण देखाएर ।
खै के नियम हो आर्मीको त्यस्तो दुर्घटनापछि पीडितका परिवारले पाउने पैसा सिधै नदिएर सुन्धारामा रहेको बैंकमा राख्न लगाउँछन् । त्यसले हामीलाई फाइदा पुगेजस्तो लाग्दैन । जब आर्मीका मान्छेले सासूससुरालाई उचाल्थे एक दिन सहनै नसकेर भनेँ, मेरो सासूससुरा मैले हेर्ने हो । किन लफडा गर्नुहुन्छ ? अरू आएर रुन्छन्, यो टेबलमा लड्छेसम्म भने ।
सासूसुराले छोरा खाइस् भने, पल्टनमा जान नदिनुपर्ने भने । उहाँहरूले सक्दो गुर्नभयो । एकातिर पति गुमाउँदाको पीडा अर्कोतर्फ आफन्तको टर्चर । मैले पति बितेको ४५ दिनमा रंगिन कपडा लगाएँ त्यसमा पनि अनेक कुरा सुन्नुप¥यो । सेतो लुगा नलगाएको भनेर रिसाउनुभयो । मलाई सेतो लुगामा सधैँ बेरिनुपर्छ भन्ने लागेन र एक प्रकारको विद्रोह गरेँ ।
हामीजस्ता आर्मीका परिवारलाई सिलाइको तालिम दिने रहेछ काठमाडौं आए । बन्दीजस्तै बनाएर तालिम दिइयो । तालिमको समयमा कसैसँग भेट्न पनि नपाउने कुरा गर्न पनि नपाउने । एकल भनेर हरियो रंगको मात्रै लुगा लगाउन दिन्थे । त्यती वेलाका चिफ साहेबकी पत्नीलाई रानीसाहेब भन्नुपथ्र्यो । उनले नै एउटा सिलाइ मेसिन र पाँच हजार नगद दिइन् । यो बेचेर नखानु बचाएर केही गर्नु भनेका थिए, त्यसैले सिलाइ पसल खोलेँ ।
यहाँ तालिममा भएको वेला आफन्तलाई कुरा गर्छु भनेर कसैले थाहा नपाउने गरी लिली थापालाई फोन गरेँ । उहाँसँग पहिला पनि भेट भएको थियो । उहाँबाट धेरै ऊर्जा पनि पाएको थिएँ । मजस्तै एकल महिलाका लागि काम गर्ने संस्था रहेछ । त्यसबाट मलाई केही गर्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा मिल्यो । आज जे छु त्यसमा उक्त संस्थाको ठूलो देन छ ।
पति बितेको केही समयपछिदेखि यो संस्थामा आबद्ध भएँ । निकै संघर्ष गरेँ । हिजो अलच्छिना बुहारी भनेर सासूससुराले हेला गर्नुहुन्थ्यो, आज बहादुर बुहारी भएको छु । उहाँहरूलाई मोटरसाइकलमा राखेर हिँड्छु । आज उहाँहरूको व्यवहार फेरिएको छ । माया र सहयोग पाएको छु । देवरहरूले पनि निकै सहयोग गर्नुभयो । आज समाज परिवर्तन र आफूजस्तै महिलाका हितमा लागेको छु । (काठमाडौंमा भएको भेटमा गरिएको संवाद)
नेपालको संविधान ०७२ का विशेषताहरू
फेवाताललाई जलकुम्भी झारले ढपक्कै ढाक्यो
ट्रयाक खुलेको पच्चीस वर्षपछि डिपिआर
पोर्चुगलमा जमेका नेपाली कराँते खेलाडी हिक्मत
लेकको लोभलाग्दो कमाइ
बालीमा बन्धक युवतीको कथा